9x33 Podcast: Pre-WWDC 2018 Ongororo | Ndinobva mac
9 × 33 Podcast: Pre-WWDC 2018 Dzidzo
Durante husiku husiku pa # podcastapple Takataura kwenguva yakareba nezve izvo zvitsva muIOS, watchOS, uye tvOS. Mune ino kesi takapotsa macOS yekuvandudza, asi zvine chokwadi chekuti inozopedzisira yasvika mumaawa mashoma anotevera kana kunyange maminetsi (sezvo iri 19:00 pm uye ivo vanowanzo vhura iwo maBhaibheri panguva ino) asi parizvino isu tiri haikwanise kuona nhau pane podcast.
Vhiki rino tanga tine mamwe matambudziko neiyo Hangouts app, saka Nacho aisakwanisa kubatana nesu panguva iyi podcast nhamba 32 yemwaka wepfumbamwe uye imwe Nacho, chero. Ngatitarisirei kuti pasvondo rinotevera matambudziko ese achapera uye vachatibvumidza kuti tiungane pamwe senge husiku hweChipiri hwese.
Iyi ndiyo vhidhiyo yepodcast nezuro manheru maunotiona paYouTube, zvisinei mumaawa mashoma anotevera ichave iripo paTunes uye yaunofarira podcast player:
Ichi ndicho chinongedzo che yedu YouTube chiteshi, saka unogona kutitevera kana kubva kuchiteshi chedu iTunes. Kana iwe uine chero dambudziko, mubvunzo kana zano reedu podcast, unogona kupindura nezvazvo. rarama kuburikidza nehurukuro inowanika paYouTube, uchishandisa iyo hashtag #podcastapple pa Twitter kana kubva teregiramu yedu chiteshi.
Chero zvazvingava chinhu chakanaka ndechekuti tiri kugadzira nharaunda yakanaka uye yakanaka kune zvese govera gorosi rako rejecha nechero yesarudzo iwe yauinayo. Isu tinofara kushandisa Chipiri manheru tichitaura nezve izvo isu zvatinoda kunyangwe zuva rinotevera isu tichidonha pairi panorira alarm.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » 9 × 33 Podcast: Pre-WWDC 2018 Dzidzo
MacOS 10.13.6 beta yakaburitswa isina yekupedzisira vhezheni 10.13.5